हाम्रो ब्लग » झुक्किनु र मुर्ख बन्नु उस्तै हो र ?
झुक्किनु र मुर्ख बन्नु उस्तै हो र ? April 1, 2009मा प्रकाशित
बार याद भएपनि त्यत्ति गते याद गरिन्न । जव समाचार लेख्न बसिन्छ अनी सोध्नैपर्छ-आज कति गते रे भन्दै । यो मेरो मात्र रोग हैन अधिकांश पत्रकारको रोग हो । कारण थाहा भएन । नेपाली गतेको हालत त यस्तो छ भने अब तारिख कसरी याद हुनु । अत्यावश्यक भएको बेलामा मात्र तारिख याद हुने । त्यसैले अंग्रेजी मितिमा मनाइने विभिन्न विभिन्न समारोह कसरी याद हुनु जसका कारण कहिलेकांही रमाइलो हुन्छ कहिलेकांही हैरान बनाउंछ यसले । त्यही हैरानी बोकेर आउंछ प्रत्येक वर्षको अपि्रल फष्टको दिन । जसलाइ अप्रिल फुल अनी नेपालमा मुर्ख बनाउने दिनको रुपमा मनाउने प्रचलन बढ्दै गएको छ ।
आमा खुवाउने औसी बाबु खुवाउने औसी विस्रन थालीसकेका छन अहिलेको पुस्ताले । तर उनीहरुमा कन्ठै हुन्छ अंग्रेजी मितिको कुन दिन कुन बार पर्छ भनेर । त्यसैले अपि्रल फष्टमा अरुलाइ मुर्ख बनाउन यही पुस्ता नै अगाडि देखिएको छ ।
मुख्य रुपमा जुलियन क्यालेन्डरलाइ विस्थापित गरेर सन १५८२ मा पोप ग्रेगरी औंले ग्रेगरिएन क्यालेन्डर प्रचलनमा ल्याएपछि नै अपि्रलको पहिलो तारिखलाइ मुर्ख दिवसको रुपमा मनाउने प्रचलन शुरु भएको मानिन्छ । त्यही ग्रेगरीयन क्यालेन्डरको प्रचलनसंगै महिलाको पहिलो दिन केही नै केही उत्सव पारिने काम गरियो ।
जनवरीको पहिलो दिन नयां वर्ष मनाउने प्रचलन ग्रेगरीयन क्यालेन्डरमा पर्यो । उता पुरानो जुलिएन क्यालेन्डर अनुसार भने अपि्रलको पहिलो दिन नयां वर्ष पर्ने रहेछ । जुलियन क्यालेन्डर स्विकार गर्नेहरुले अपि्रलको पहिलो दिनलाइ नयां वर्षको रुपमा मनाउन थालेपछि ग्रेगरियनहरुले उनीहरुलाई परम्परावादी भनेर जिस्काउन थाले । त्यसरी जिस्काउंदा जिस्काउदै अपि्रल फष्टको दिन मुर्खहरुको दिवसको रुपमा स्थापीत भएको हो ।
मुर्खहरुको दिवस भनिएपनि प्राय झुक्याउने दिवसको रुपमा यो अगाडि बढिरहेको छ । कुनै रचनात्मक काम गरेर मुर्ख बनाउनुभन्दा झुक्याएर जर्वजस्ती मुर्ख बनाउने प्रयास गरिन्छ आज । तरझुक्याउनु र मुर्ख बनाउनु दुइ फरक विषय हुन । तर यहां यस्तै छ । त्यसरी नै झुक्याएर मुर्ख बनाउन सिपालु एक जनाको सिकार बने आज विहानै म । कसरी झुक्याइयो मलाइ ल पढ्नुस है त ।
विहान तीन वजे घर पुगेर सुतेको थिए । विहानै सांढे सातवजेतिर मोवाइल बज्यो । एक जना मित्रले फोन गरेकी थिइन । उनी महत्वपुर्ण काम परेकाले नभेटी भएन भन्दै थिइन । मैले ११ वजेतिर भेटौन हुन्न भनेर प्रस्ताव राखे तर उनले मानिन । म यहांबाट हिडेहै । तपाई चोकमा निस्कनु होला भन्दै उनले फोन राखिन ।
हत्तेरी भन्दै आंखा खुल्न नमानेपनि जर्वजस्ती आंखा च्यात्दै उठे । महत्वपुर्ण काम भनेकाले उठ्न करै लाग्यो । घरमा चिया मगाए अनी खाएर सरासर चुच्चेपाटीचोकमा निस्किए । तर चोकमा बोलाउने ब्यक्तिको अत्तोपत्तो थिएन । हैन चावहिल चोक पो भनेको हो कि भनेर त्यत्तैतिर लागे हाइ काढ्दै । १५ मिनेट बस्दा पनि चावहिल चोकमा उलनाई भेट्न सकिन ।
फोन गरे-हलो कता हो म चावहिल आइसके । उतावाट उत्तर आयो-त्यही चिया खाने पसलमा त छु नी ।
म लागे चिया पसलतिर । तर धुईधुईति खोजे । अहं छैन ।
झनक्क दिमाग तात्यो फोन गरेर फेरी सोधे-कता हो के जिस्कीरहेको । आउने भए आउ नत्र लागे म घरतिर ।
उतावाट हांसो आयो । अनी भनिन-भित्र त छु नी भित्र आउनो न ।
फेरी भित्र गएर सबै टेवलको अनुहार नियाले । दोस्रो पटक फेरी आएको देखेर पसलले सोध्यो कसलाइ खोज्नु भएको भनेर । म नबोली बाहिर निस्किए । मोवाइलमा म्यासेज आएको टोन बज्यो । फेरी कसले के भनेर पठायो भनेर हेरेको त महत्वपुर्ण काम छ भनेर विहानै बोलाउने ति मित्रले लेखेकि थिइन-अपि्रल फुल । झनक्क रिस उठ्यो ।
फोन गरेर झपारे-काम छैन केही अनी लुरुलुरु घरतिर लागे । पहिला रिस उठेपछि पछि भने हांस उठ्यो । थुक्क विहानै पत्रिका पढेको भए त डेट थाहा भइहाल्थ्यो नी ।
Uncategorized ट्यागहरू: April Fool5प्रतिकृयाहरू5responses to "झुक्किनु र मुर्ख बन्नु उस्तै हो र ?"
Netra P. Paudyal 'Krishna' says:	2009/04/01 at 2:15 pm	हसाउनु भो के पि जी ले पनि! साथिभाइले कहिले काहि जिसकाउछन नि त, गाह्रो मान्नु हुन्न नि ।
Reply	आज YouTube (यु ट्युब) को चर्तिकला « Pardesh Baata says:	2009/04/01 at 5:45 pm	[...] र पो थाहा पाए कि आज अप्रिल फस्ट यानी कि अप्रिल फूल । बेकार मा दुख पाए, धन्न कसो भाइरस हो [...]
Reply	आकार says:	2009/04/01 at 5:52 pm	Exclusive : नेपाली रुपैयाँ को नोटमा प्रचण्ड को फोटो छापिने
विश्व साइकल यात्री युरोपमा दम्पट
इमेल ह्याक गर्ने सजिलो उपाय Reply	madan says:	2009/04/01 at 9:00 pm	Yes ! its good… history to this day… full and final coverage… ha ha ha Bt im not making u foool Reply	April Fool Day on Nepali Websites says:	2009/04/02 at 11:28 pm	[...] are not many and they are NOT sorted according their wit or excellence). Hamroblog has its definition of April Fool’s day in Nepalese context andastory about [...]